हामीले बिर्सिसक्यौं, कोट्याएर नसम्झाउनुहोला : महासचिव विष्णु पौडेल « हाम्रो ईकोनोमी
हामीले बिर्सिसक्यौं, कोट्याएर नसम्झाउनुहोला : महासचिव विष्णु पौडेल
नेकपाको दोस्रो पूर्ण बैठक दुबै अध्यक्षका लागि ‘विन–विन’ भएको हो ?
दुईजना अध्यक्ष आपसमा लड्नुभएको भए एउटाले जित्ने र अर्को हार्ने सम्भावना हुन्थ्यो । उहाँहरूले आपसमा होइन, चुनौतीका विरुद्ध लड्ने सामूहिक अठोट गर्नुभएको हो । त्यसकारण यो बैठकमा एउटा अध्यक्षले जित्ने र अर्कोले हार्ने कुनै सम्भावना नै थिएन । कि दुबैले हार्नुपथ्र्यो, कि दुबैले जित्नुपथ्र्यो । दुबैले जित्नु भयो । दुईजना अध्यक्षले मात्रै होइन, सिंगो केन्द्रीय कमिटीले जितेको छ । सारमा भन्ने हो भने समस्त पार्टीले जितेको छ ।
नेकपाको दोस्रो पूर्ण बैठक कहीँ न कहीँ अन्तरविरोधको भुँवरीमा फस्ला र त्यहाँनेर बल्छी थाप्न पाइएला, भूक हाल्न पाइएला भन्ने शक्ति÷प्रवृत्तिहरू यतिबेला निराश छन् । मिहिनेत त गरियो, तर नतिजा आएन भनेर निराश छन् ।
हाम्रा लागि भने बैठक यसरुपमा नै सम्पन्न हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान थियो । सफल तथा प्रभावकारी आयोजना गरेर सार्थक निश्कर्षमा पुग्छौं, एकतावद्ध ढंगले बैठक आयोजना गरेर पार्टी र जनसमुदायलाई हाम्रो एकताले नयाँ उचाई चुम्दै गरेको सन्देश दिन्छौं भन्ने पूर्वानुमानित विषय नै थियो ।
जस्तो– मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोेरेसन (एमसीसी) मै बैठक कुनै निश्कर्षमा पुग्न नसकेर कार्यदल नै बनाउनुपर्‍यो । बैठकले प्राप्त गरेको सफलताचाहिँ केमा हो ?
जुन उद्देश्यका लागि बैठक आयोजना गरिएको थियो, त्यो प्राप्त गर्न सफल भयौं । हामीले चाहेको पहिलो कुरा के थियो भने पार्टी एकतादेखि आजसम्मको यात्राको संक्षिप्त समीक्षा गर्न चाहेका थियौं ।
हाम्रा सामूहिक अभिभाराहरू के हुन् भन्ने यकिन गर्न चाहेका थियौं । ती अभिभारा पूरा गर्नका लागि समयवद्ध र चरणवद्ध योजना बनाउन चाहेका थियौं । यी कामहरू गर्न बैठक सफल भएको छ ।
त्यसका साथसाथै राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण गर्न चाहेका थियौं । त्यसमा पनि सर्वसम्मतिले एक ठाउँमा पुगेका छौं । कार्यसूचीमा सफल र सार्थकताका साथ निर्णयमा पुगेका छौं ।
साढे चार सयजनाको बैठक आयोजना गरेको अनुभव थिएन । किनभने पहिलो पूर्ण बैठक एकताको उत्साहमा केहीघण्टामै सम्पन्न गरेका थियौं । व्यवस्थितरुपमा बैठक कसरी सम्पन्न गर्छौं भन्ने प्रश्न थियो ।
एकातिर सहभागीहरूलाई कार्यसूचीमा पर्याप्त छलफल गर्न दिनु थियो । अर्कोतर्फ, निर्धारित समयमा बैठक सम्पन्न गर्नु पनि थियो । यो जटिलताका वाबजुत सबै सहभागीहरूलाई यथेस्ठ छलफल गर्ने समय उपलब्ध गरायौं । निर्धारित समयमा सुरु गरेर निर्धारित समयभन्दा १५ मिनेट अगाडि बैठक सम्पन्न गर्‍यौं ।
अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको दृष्टिकोणले पनि यो बैठक एउटा अनुकरणीय बैठक हो । कार्यसूची र कार्यविधिसमेत बैठकबाट पारित गर्‍यौं । अर्थात बैठक कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरा पदाधिकारी वा अध्यक्षले मात्रै गर्ने स्थिति रहेन । बैठकमा के–के छलफल गर्छौं भन्ने कुरा पनि बैठकले नै तय गर्‍यो । बैठक स्वयं आफैंले निर्धारण गरेको कार्यविधि र कार्यसूची अनुसार अगाडि बढ्यो र तोकिएको समयमा सम्पन्न भयो ।
निर्णय थोपर्ने होइन, कम्युनिष्ट पार्टीमा सामूहिक निर्णय लिइन्छ भन्ने कुरा यो बैठकले स्थापित गरेको छ ।
एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ, गर्नैहुँदैन वा सुधारसहित अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने तीनखाले विचार बैठकमा देखिएका थिए । यसमा महासचिवको दृष्टिकोणचाहिँ के हो ?
पार्टीले औपचारिक ढंगले कार्यदल बनाएर, १० दिनको समय लिएर अध्ययन गर्न लागेको हुनाले अहिले नै मैले निजी धारणा व्यक्त गर्नु सुल्टो हुँदैन । तर, एमसीसी के हुन्छ भन्ने कुराको अनुमान तपाईहरूलाई पनि छ, हामीलाई पनि छ ।
जहाँसम्म कार्यदल गठनको कुरा छ, त्यो पनि हारजितको विषय होइन । अझै गहिराई पुगेर अध्ययन गरौं र निर्णय गरांै भनेर सर्वसम्मतिले कार्यदल गठन गरेका हौं ।
झलनाथ खनाल र भीम रावलले एमसीसीको विरोध गर्दै आउनुभएको छ । कसैले कार्यदलमा बस्न अनिच्छा व्यक्त गर्नुभएन ?
साथीहरूले हार्दिकतापूर्वक नै जिम्मेवारी ग्रहण गर्नुभएको छ ।
सरकारको कामलाई हेर्ने विषयमा पनि पार्टीभित्र दुईखाले दृष्टिकोणहरु देखिए । यसको संश्लेषण कसरी गर्नुहुन्छ ?
सरकारले राम्रो काम गरेको छ, अझै राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश हो । कामका दौरान कमीकमजोरी छन् भने सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने नै हो ।
यती होल्डिंग्सको विषयमा रक्षामन्त्रीबाट श्वेतपत्र आउने कुरा थियो नि ?
हो । त्यो सबै कुरा आउँछ ।
पार्टीभित्र माथिदेखि नै गुट झाँगिएका छन् भन्ने बैठकमा आवाज उठेको थियो, यसमा के उपलब्धी भयो ?
हामी एकतावद्ध पार्टी निर्माण गर्ने उद्देश्यमा छौं । यसको अन्तरनिहीत अर्थ के हो भने गुट भत्काएर मात्रै एकताबद्ध पार्टी निर्माण गर्न सक्छौं । कि हामीले एकता रोज्नुपर्छ, कि गुट । गुट रोज्ने हो भने एकता सम्भव छैन । एकता रोज्ने हो भने गुट सम्भव छैन ।
हामीले आफ्नो जीन्दगी दिएका पार्टी विघटन गरेर अर्को पार्टीसँग एकता गरेका हौं । त्यसकारण भनिरहनु नपर्ला, हाम्रो छनोट गुट होइन, पार्टी हो । विभाजन होइन, एकता हो ।
एकताको हिसाबले हामी पूर्वसमूहको सम्झनाबाट धेरै माथि उठिसकेका छौं । गुट निर्मूल गर्ने सन्दर्भमा यो बैठक एउटा कोशेढुंगा हो । यो कुरा म फेरि दोहोर्‍याएर भन्न चाहन्छु– गुट निर्मूल गर्ने सन्दर्भमा यो बैठक कोशेढुंगा हो ।
यहाँले बैठक कोशेढुंगा हो भन्नुभयो । तर, सचिवालयमै गुट देखिएको थियो । जस्तो– भैंसेपाटी बैठक…..
कहिलेकाँही घटनाहरू घट्छन् र ती चीजहरू विस्मृतिमा गइरहेका हुन्छन् । तपाईले स्मरण गर्नुभएका कैयौं कुराहरू हामीले बिर्सिसक्यौं । फेरि त्यसलाई कोट्याएर सम्झाउन उत्प्रेरित नगर्नु होला भन्ने मेरो आग्रह हो ।
हामी साँच्चै एकताबद्ध भइसकेका छौं । अहिलेको नेतृत्वको जुन टीम छ, यहाँ धेरै कोशिस गर्दा पनि विभाजनका रेखा भेट्न गाह्रो हुन्छ । किनभने, विभाजनका रेखाहरूलाई राम्रैसँग मेटाइसकेका छौं । नेतृत्व र सिंगो पार्टीपंक्तिलाई एकतावद्ध गरेका छौं । पार्टी र नेतृत्वमा सर्वसम्मति थिएन भने यस प्रकारको बैठक आयोजना र यस प्रकारको सफलता सम्भवै थिएन ।
यो बैठकबाट सिक्नुपर्ने पाठचाहिँ के हो ? बैठकमा केही कमीहरु पनि त देखिए होला नि ?
केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो पूर्ण बैठक अहिलेको बैठकभन्दा नराम्रो गर्न पाउँदैनौं भन्ने सन्देश दिएको छ । सक्छौ भने योभन्दा अझै राम्रो गर्दै जाउ भन्ने पाठ सिकाएको छ ।
यसपटक दस्तावेजहरू केन्द्रीय कमिटीको बैठक प्रारम्भ भएसँगै वितरण गर्‍यौं । आगामी बैठकमा कार्यसूची र दस्तावेजहरू अग्रिमरुपमै पठाउँछौं ।
बैठकमा पेश भएका प्रतिवेदनहरु पनि अलि हतारमै बनेजस्तो लाग्दैन ?
हतारमै बनायौं । त्यसमा लुकाउनुपर्ने केही पनि छैन । पार्टीका दस्तावेज बैठकका निम्ति सर्वाधिक महत्वका विषय हुन् । त्यसको तयारीमा अपेक्षित समय विनियोजन गर्नुपर्छ ।
दुईवटा पार्टी एकीकरण भएर बनेको ठूलो कमिटीको बैठक लामो समयमा बस्दा कतिपय केन्द्रीय सदस्यबीच नै चिनजान थिएन होला…..
त्रिशुली र सेतीको पानी मिसिए पनि अलि तलसम्म सेतो र नीलो देखिन्छ । करिब–करिब सेतो र नीलो छुट्याउन नसक्ने गरी अन्तरघुलन भइसकेको छ ।
अब पार्टीले सञ्चालन गर्ने भनेको राष्ट्रिय अभियान कसरी अगाडि बढ्छ ? अभियानको उद्देश्य के हो ?
यो अभियान तीन महिना सञ्चालन हुन्छ । अभियान फागुन १ देखि बैशाख मसान्तसम्म चल्छ ।
सदस्यता विस्तार र नवीकरणका कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाएका छौं । पार्टीका नेता, कार्यकर्ता सदस्यहरूलाई पार्टी कमिटीमा वा सम्वद्ध संगठनहरूमा संगठित गर्छौं । विकास निर्माण र समृद्धिसँग जोडेर पार्टी पंक्तिलाई परिचालित गर्छौं । जननिर्वाचित संस्थाहरूलाई पनि त्यस ढंगले परिचालित गर्छौं ।
र, विभिन्न प्रकारका खराबीहरू, जस्तो– भ्रष्टाचार, अनियमितता, चुहावट, छाउपडी, बोक्सी प्रथा जस्ता सामाजिक विकृतिविरुद्ध पनि पार्टीपंक्तिलाई परिचालित गर्छौ । नेकपा हाम्रो सेवक बनेर आएको छ भन्ने जनताले अनुभूत गर्ने गरी योजनावद्ध, एकीकृत ढंगले जनतासँग जोड्ने गरी यो अभियान सञ्चालन गर्न लागेका हौं ।
अब समस्त पार्टी काममा केन्द्रित हुन्छ । पार्टीभित्र काम नहुँदा गुनासो गर्ने स्थिति पनि थियो । ठूलो कार्यशक्तिलाई काम दिएर खटाउन चुकिरहेका थियौं । अब हामी पार्टीका प्रत्येक सदस्य, कार्यकर्ता र नेतालाई आवधिक काम दिन्छौं । अभियानको काम सकिएलगत्तै उहाँहरू आ–आफ्ना नियमित काममा लाग्नुहुन्छ ।